NETFLIX က IDRIS ELBA ရဲ့ TURN UP ကိုချာလီနဲ့ကြည့်ရှုသူတိုင်းအတွက်မပျော်ရွှင်ပါ - တီဗီ
Netflix သည် Idris Elba ၏ချာလီကိုဖွင့ ်၍ ကြည့်ရှုသူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်သည်မဟုတ်ပါ
Id Up Elba ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Turn Up Charlie ဂီတဒရာမာကို Netflix ကတစ်ရာသီပြီးဆုံးသွားပြီ။
ချာလီသည်တက်လာပြီးမှတ်တမ်းအချို့ကိုကုတ်ခြစ်ပြီး Netflix မှသူ၏ချီတက်ဆန္ဒများကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
Variety ကယနေ့သတင်းစာစောင်သည် Idris Elba ရှေ့တန်းတင်သောဂီတဒရာမာ၊ ချာလီကိုဖွင့်ပါ , ရုံတ ဦး တည်းရာသီအပြီးစည်သွတ်ခဲ့သည်။ Elba ကိုရုန်းကန်နေရသည့် DJ နှင့်ထာဝရလူပျိုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သောအဆိုပါဟာသသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ ချာလီကိုဖွင့်ပါ DJ အာရုံခံစားမှုနည်းပါးပြီး one-hit-wonder ပိုဖြစ်သည်။
Idris Elba သည်မူလက Gary Reich နှင့်အတူစီးရီးကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးပြဇာတ်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောသူဖြစ်လာသည့်ပြဇာတ် - ကလေး Sara နှင့်မရင်းနှီးသောချာလီအဖြစ်နာမည်ကြီးဖျော်ဖြေမှုကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။
Turn Up ချာလီသည်ဒုတိယရာသီအတွက်ပြန်လာမည်မဟုတ်ပါ။ DJing နှင့်ပတ်သက်သောသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှု၊ နှလုံးနွေးထွေးဖွယ်ဟာသစီးရီးဖြစ်သည့်ကြယ်ပွင့်နှင့်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Idris Elba အားကျွန်ုပ်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Netflix ပေါ်ရှိဤဘဝကိုအသက်ဝင်စေခြင်းအတွက်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Gary Reich နှင့် Tristram Shapeero နှင့်တွဲဖက်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Martin Joyce နှင့် Ana Garanito တို့အားလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အနာဂတ်စီမံကိန်းများအတွက် Idris နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
အခုတော့သတင်း, ပရိတ်သတ်တွေဖဲ့ခဲ့သည် ချာလီကိုဖွင့်ပါ လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဟုပြောခြင်းသည်မျှတသော်လည်းသူတို့၏တိုင်ကြားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်တွစ်တာသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည် စိတ်ပျက် Netflix ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်။
Leon နေထိုင်သူမကောင်းသောအများတွင်ဖွစျလိမျ့မညျ 7
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ပြဇာတ်၏ဝေးကွာသောနေရာဖြစ်သည် လူသာ ကြည့်ရှုသူများသည်ထိုင်ခုံ၏အစွန်းတွင်အမြစ်တွယ်နေသောငါးရာသီနှင့်ဖြစ်စဉ် ၂၀ ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ချာလီကိုဖွင့်ပါ ? အရမ်းမများပါဘူး။ သို့တိုင်ဤတွင်အင်တာနက်နံရံများမှပဲ့တင်ထပ်နေသောပန်ကာတုံ့ပြန်မှုအချို့၏အတိုအထွာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Damn it @netflix 🤬🤬🤬 #TurnUpCharlie ရာသီ2ရှိသင့်တယ် https://t.co/W2Ed82Fwob
- Tina W (@tmwinsett) 2020ပြီလ 27, 2020
ငါထင်တယ် @netflix လုပ်ဖို့လိုတယ် #TurnUpCharlie ရာသီ 2, မထင်ပါဘူး @idriselba ?
- Lou, The Big Mac 🧢 (@GallifreyKid) 2020ပြီလ 23, 2020
ငါတကယ်ကြိုက်တယ် #TurnUpCharlie ။ https://t.co/B810uPgkxY
- Tamara Bass (@MizzTamaraBass) 2020ပြီလ 27, 2020
မင်္ဂလာပါ ငါတကယ်တကယ်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီပျော်မွေ့ခဲ့သည် #TurnUpCharlie https://t.co/0j3ZNzxzQD
- Shaniqua🧚‍♀️ (@ 121shan) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
ရုံအကြောင်းကိုကြား၏ @idriselba 's #TurnUpCharlie ဖျက်သိမ်းခံရ။ ဟေ့၊ ငါ့ ၅၀ ပေါ့ # မွေးနေ့ သင်သည်ငါ၏လက်ဆောင်အဘို့အဖျက်သိမ်းနိုင်သလား @netflix ?
- Indeliblefink (@IndelibleFink) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
ဆယ်ကျော်သက်ဝံပုလွေရာသီ3ဇာတ်လမ်းတွဲ 9
အဘယ်ကြောင့် WTF @NetflixUK #TurnUpCharlie friggin '' ထိပ်တန်းဖြစ်ခဲ့သည် #sad ကြိမ် @idriselba 🤬 https://t.co/0pegavP3Fa
- mEmma‍♀️ (@ Sandsy79) ၂၀၂၀ 26ပြီ ၂၆ ရက်
- M Binder 🇺🇸 (@agilkees) 2020ပြီလ 27, 2020
- saumya (@saumyakhannaa) 2020ပြီလ 27, 2020
လူသား, ငါတကယ်ပြပွဲပျော်မွေ့ ..
- တစ္ဆေကလေး။ (@CLAXXS) 2020ပြီလ 27, 2020
ရာသီ5Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ arrow
- Lewis Kent (@LouisMeynadier) 2020ပြီလ 27, 2020
ငါ 100% အခြားရာသီစောင့်ကြည့်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာမာရသွန်ပြေးရန်အကြီးပါပဲ
- မီလာ (@tweetsdomuller) 2020ပြီလ 27, 2020
ဒီဟာယူတာပဲ @netflixca သင်စိတ်မချရသောအွန်လိုင်း streaming တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တူသည်။ Netflix မူရင်းစာဖတ်ပရိသတ်ကိုနားမထောင်ခြင်းသည် ပို၍ ပင်ဆိုးသည်။ အဆိုပါကောင်းသောသူတွေကိုသက်တမ်းတိုးဘယ်တော့မှကြသည် !! ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးသောရေရှည်ပြပွဲအချို့သည်သူတို့၏လက်ထဲတွင်မရှိပါ။
- KRYSTAL (@KrystalKGWR) 2020ပြီလ 27, 2020
ဒါကြောင့်ပဲ: ချာလီကိုဖွင့်ပါ Netflix pan ထဲမှာ flash တစ်ခုအစဉ်အမြဲမှတ်မိနေလိမ့်မည်။ စုစုပေါင်းဇာတ်လမ်းတွဲရှစ်ခုသာပါဝင်သော Idris Elba သရုပ်ဆောင်ဒရာမာသည်ဒုတိယစီးရီးအတွက်ပြန်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့သို့သော်ဂျိမ်းစ် Gunn ရဲ့သည့်အခါ Elba Task Force X ကိုအတူပေါ်ထွန်းမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် သတ်သေတပ် လာမည့်နွေရာသီပြဇာတ်ရုံသို့ပျင်းရိ - ကသင်တန်း၏တစ် ဦး COVID-related နှောင့်နှေးနှင့်အတူ hit မပေးပါ။
ရင်းမြစ် - အမျိုးမျိုး
လမ်းလျှောက်နေသောသေသူသည် netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်လာပါသနည်း
Netflix အပေါ် Jake Gyllenhaal နှင့်အတူရုပ်ရှင်တွေ
wilsons နှာခေါင်း owen မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
2013 ခုနှစ် indie ရုပ်ရှင်ကားစာရင်း